Ihe ịzụta n'Ijipt | Akụkọ Njem
Ihe ịzụta n'Ijipt
Onye njem ọ bụla nke nwere mkpụrụ obi onye nyocha maara na Egypt bụ ebe na-adọrọ mmasị iji biri ọtụtụ ahụmịhe na-eme ka akụkọ ọgaranya ya na ogologo oge ya. Na obodo a mara mma, anyị nwere ike ịmasị ihe ochie ndị ochie, pyramid a ma ama, ili ndị fero na Naịl. Mara ihe n'onwe gị ihe niile anyị gụrụla n'akwụkwọ.
Na nleta na Egypt, ị ga - ese ọtụtụ foto iji jupụta ọtụtụ ọba mana ị nwere ike iweta ụdị ncheta ndị ọzọ na onyinye maka ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi. Nke bụ eziokwu bụ na Egypt bụ mba magburu onwe ya ịga zụọ ahịa, ebe ọ bụ na obodo ya nwere nnukwu ahịa ebe a na-ere ihe niile ị nwere ike ịchọta ma doro anya na ngwaahịa kachasị dị na ala a. Kedu ihe kachasị mma ị nwere ike ịzụta n'oge ezumike gaa Egypt?
3 Uwe agba agba agba
Papyri dị mfe ịchọta n'ụlọ ahịa na obodo niile. Ọ bụ nkwado maka ide ihe ndị Ijipt oge ochie nwetara site na ahịhịa mmiri nke a na-akpọ paịprọs Cyperus.
Papiiri ziri ezi abụghị ihe dị ọnụ ala ka ị zere ịbụ onye a na-emekpa ahụ, ị ​​ga-ele ya anya na ọkụ, n'ihi na ọ bụrụ na ntụpọ ojii apụta ị nwere ike ijide n'aka na ọ bụghị otu. Uzo ozo bu ime ya mmiri ebe obu na mgbe ina eme akwa ahu nke n’eme ya ekwesighi ikewa.
Ndị Ijipt jiri papaịrọs dekọdere ihe osise, ihe ndị metụtara chi ha, na ihe ndị merenụ ga-eme n’ọdịnihu.
A na-akpọ metal na iko iko anwụrụ ụtaba nke flavors dị iche iche ma kpochaa mmiri mmiri shisha. Ọ bụ agwa a gbanyere mkpọrọgwụ na mba Alakụba ya mere na ọ dị mfe ịchọta ha n'ụlọ nri na ụlọ ahịa tii na azụmaahịa.
Ha nwere nha na ụdị dị iche iche, yabụ ọ bụrụ na ị gaa ụlọ ahịa aka iji zụta shisha, ị ga-ahụrịrị ha aka jiri ihe osise ụfọdụ eji achọ mma nke ndị Ijipt aka. Otu n'ime ebe kachasị mma iji zụta ha bụ ahịa Khalili dị na Cairo, ebe ị ga-ahụ ọtụtụ dị iche iche na ọnụahịa mara mma.
Uwe agba agba agba
Site na ndị Ijipt, agba egwu a gosipụtara site na mmegharị ụfọdụ hip na egwu dị egwu. A na-eji ejiji agba egwu a eme uwe dị iche iche na agba ya na ịcha mma. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị njem nleta ịzụrụ uwe ndị a dị ka ihe ncheta mana emeghị ha ka a jiri ha n'èzí.
Ọtụmọkpọ ndị dị n'ọdịdị ahụ bụ ihe ncheta ọzọ ịzụta n'Ijipt. Ndị Ijipt oge ochie na-ezo aka na scarab dị ka Ra, onye okike nke eluigwe na ala na otu n’ime chi ndị kachasị mkpa nke okpukpe oge ochie. Ha na-abịa na ihe niile, agba na nha. Ha na-ewu ewu nke ukwuu na olu na mgbaaka.
Djellaba bụ uwe ndị Ijipt. Ọ bụ uwe e ji ihe dị iche iche mee nke na-ekpuchi ahụ site n’olu ruo n’ụkwụ. Traditionmụ nwoke na-eyiri ya uwe ọcha na ụfọdụ nkọwa na-acha ọbara ọbara n'olu, ebe ụmụ nwanyị nwere ọtụtụ agba na ihe ịchọ mma ịhọrọ. Enwere ike ịchọta ha n’ọtụtụ ụlọ ahịa dị n’obodo ndị gbara gburugburu Naịl, yanakwa n’ụlọ ahịa ọdịnala ndị dị na Cairo.
Mba Africa nwere ọdịnala dị ukwuu n'ịmepụta ihe na-esi ísì ụtọ na ọ bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị achọ ịzụta n'Ijipt. Ọ bụrụ na ihe kachasị mkpa dị mma, otu dobe kwesịrị ịsafu mmanụ ogologo oge. Na obodo ndị dị ka Alexandria ma ọ bụ Cairo enwere okporo ụzọ ndị a jupụtara n'ụdị ụlọ ahịa ndị a mana ị ga-akpachara anya ịzụta ihe nsure ọkụ na-echekwa n'ụlọ ahịa nwere nkwa n'ihi na ụfọdụ na-agwakọta ihe bụ isi na ọtụtụ mmiri wee ree ya dị ka ezigbo mmanụ.
Otu onye amara nke-ọma bu Alamir Perfumes Palaces maka isisi ya nke akpọrọ Nzuzo nke ọzara. Ọ dị nso n'akụkụ mpaghara Giza ma bụrụ nke gọọmentị Ijipt gosipụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Egypt » Ihe ịzụta n'Ijipt